41 vanhu vakaurawa, vakawanda vakashaikwa muIndia kudengenyeka kwenyika nemafashama
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » India Kupwanya Nhau » 41 vanhu vakaurawa, vakawanda vakashaikwa muIndia kudengenyeka kwenyika nemafashama
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Hurumende Nhau • India Kupwanya Nhau • nhau • vanhu • Resorts • Kutarisirwa • chengetedzo • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now
41 vanhu vakaurawa, vakawanda vakashaikwa muIndia kudengenyeka kwenyika nemafashama.
Vanopfuura zana vashanyi vakasungirirwa mukati meiyo nzvimbo yekutandarira muRamgarh mushure merwizi rwakafashukira Kosi rwakazadza nzvimbo dzinoverengeka.
Vanhu makumi matatu nevatatu vakaurayiwa mukukukurwa patsva kweChipiri mudunhu reHimalaya muUttarakhand.
Vanenge makumi matatu vanhu vakaurayiwa muzviitiko zvinomwe zvakasiyana munzvimbo yakakanganiswa zvakanyanya yeNainital kutanga Chipiri.
Vakuru vanoti kununura kwacho kunotora mazuva maviri kana matatu uye vakawanda vanhu vachiri kushayikwa.
Sekureva kwevakuru vehurumende yeIndia, vanhu vanosvika makumi mana nevatanhatu vakaurayiwa uye vakawanda vakashaikwa mukupunzika uye nemafashama emvura kuchamhembe kweIndia, zvichikonzerwa nemvura zhinji-zhinji.
Vanhu makumi matatu nevasere vakaurayiwa mukukukurwa patsva kweChipiri mushure mekunge vatanhatu vafa muzviitiko zvakafanana zuva rapfuura, mudunhu reHimalaya Uttarakhand.
Vanhu vangangoita makumi matatu vakaurayiwa uye vanhu vazhinji vachiri kushayikwa muzviitiko zvinomwe zvakasiyana munzvimbo yakakanganiswa zvakanyanya yeNainital mudunhu reChipiri, mushure memafashama emvura - mafashama emvura akanyanya - akakonzera kukoromoka kwepasi uye nekuparadza zvivakwa zvakati wandei.
Nzvimbo dzinoverengeka dziri kure munzvimbo ine makomo dzakaona kukuvara kwakapararira mukunaya kukuru kwemvura.
Mauto, National Disaster Response Force neuto renyika rekudzivirira njodzi vese vari kubatsira mukuita kwekununura ikozvino mu Uttarakhand.
Vakuru vakati kununura kwacho kunotora mazuva maviri kana matatu uye vakawanda vanhu vachiri kushayikwa.
Kumwe kupunzika kwevhu mudunhu reAlmora kuchamhembe kwakauraya vanhu vashanu mushure mematombo mahombe uye madziro emadhaka aputswa nekuparadza imba yavo.
Vamwe vanhu vatanhatu vakaurayiwa neMuvhuro kumatunhu maviri ari kure ehurumende.
The Indian Meteorological Dhipatimendi yakawedzera uye yakawedzera mamiriro ayo emamiriro ekunze neChipiri, ichifungidzira "inorema" kune "inorema kwazvo" kunaya mudunhu mukati memazuva maviri anotevera.
Hofisi yemamiriro ekunze yakati nzvimbo dzinoverengeka dzakadonhedzwa nemvura inopfuura mazana mana (400 inches) yemvura nezuro, zvichikonzera kukukurwa kwenyika nemafashama.
Zviremera zvakaraira kuti zvikoro zvivharwe uye zvakarambidza zvese zvechitendero uye zvekushanya muhurumende.
Vanopfuura vashanyi zana vakanamatira mukati mekutandarira muRamgarh, India mushure mekufashukira kwerwizi rweKosi rwakazadza nzvimbo dzinoverengeka.
Vafemberi vakayambira pamusoro pemvura zhinji inonaya mumazuva anotevera mudunhu rekumaodzanyemba kweKerala uko mafashama akatouraya vangangoita vanhu makumi maviri neshanu kubvira Chishanu.
Madamu mazhinji mudunhu anga ave pedyo nenjodzi uye zviremera zvaiendesa zviuru kunzvimbo dzakachengeteka sezvo nzizi huru dzakazara.
IndiaHofisi yemamiriro ekunze yakati kunaya kwakanyanya kucharova zvakare nyika mumazuva maviri anotevera mushure mekudzikamisa pfupi nhasi.